Sarety Famindrana Flow Laminar
Sothis laminar fIVAfamindrana entana is natao ho fitehirizana sy ny famindrana ny vokatra izay saro-pady ny fandotoana eosamy hafaFARITRY NYs.Ny sarety famindrana anay dia afaka manome fepetra fitahirizana ISO 5 na ISO 4 (kilasy 100 na kilasy 10) ho an'ny singa manan-danja) MADIOTONTOLO IAINANAtohanafoana ny loto mandritra ny famindrana fitaovana sterile.
Ny sivana HEPA dia karazana sivana rivotra mekanika mipetaka. Ity karazana sivana rivotra ity dia afaka manala farafahakeliny 99,97% ny vovoka, vovobony, bobongolo, bakteria, ary izay poti entin'ny rivotra manana habe 0,3 microns (µm).
Ny boaty Hepa Terminal Filter dia efitrano fivoahana rivotra madio miaraka amin'ny sivana microparticulate naorina ho an'ny filtration sy fizarana rivotra ho an'ny rafitra fanamafisam-peo 1000, 10000 ary 100000. Ny fahombiazana dia avy amin'ny 95% hatramin'ny 99.9995% amin'ny 0.3 micron.Mora ny mametraka, fanerena static avo, tabataba ambany, fanjifana angovo ambany, ny rivotra dia mitovy, ny tsindrin'ny rivotra dia miparitaka.
Manasaraka ny mikraoba, ny viriosy ary ny poti-bovoka alohan'ny hidiran'ny rivotra ao amin'ny efitrano madio sy aorian'ny fizarana rivotra.
Toeram-pisakafoanana madio amin'ny Laminar Flow Portable
Ny dabilio madio fikorianan'ny laminar portable dia dabilio kely madio misy endrika maivana, miendrika ary mitsitsy toerana misy habe samihafa.Azo atao ny mitsangana sy mitsivalana.
Bench madio amin'ny Laminar Flow mitsangana
Ny dabilio madio laminar Sothi YJ Series dia manome rivotra voadio avy amin'ny sivana HEPA eo ambanin'ny tontolo ISO 5 (kilasy 100) amin'ny faritra fiasana lehibe, miampy mamela ny fiasana tsy misy vibration.Ao amin'ny saron-tava mitsangana mitsangana, ny rivotra madio voasivana dia midina midina avy eo amin'ny tavan'ny sivana eo an-tampony mankany amin'ny sehatry ny asa.
Samy misy OEM sy ODM.
Ny Sity cjandian-dahatsoratraHorizontal Laminar flow hoods (Dabilio madio) dia manome tontolo iainana voasivana HEPA ISO 5 (kilasy 100) tsy misy loto,Bfaritra miasa amin'ny vy tsy mitongilana ary mora simbaina.Samy misy OEM sy ODM.
Ny valin-drihana laminar fikorianan'ny hood dia rafitra fanadiovana rivotra izay afaka manome tontolo madio eo an-toerana ary azo flexibly apetraka eo ambonin'ny teboka izay mitaky fahadiovana ambony.Ny tafon'ny laminaire flow hood dia afaka manome rivotra madio ISO 5/100 mba hahazoana ny fahadiovana ilaina amin'ny faritry ny asa.Ampiasaina betsaka amin'ny laboratoara ara-pitsaboana, elektronika, pharmaceutique, fikarohana sy fampandrosoana ary sehatra hafa.
Toeram-pandanjana fanerena ratsy ho an'ny Pharmaceutical
Ny trano heva sothis milanja dia miaro ny akora mandritra ny asa fanaovana santionany sy famoahana ary misoroka ny fandotoana.Miaro ny mpiasa amin'ny poti-poizina izy io eo am-panatanterahana ny dingana mifanaraka amin'ny zavatra takinao na natao manokana ho anao.Ny haavon'ny fanadiovana dia afaka mahafeno ny filana samihafa avy amin'ny ISO8 ka hatramin'ny ISO5 araka ny takian'ny mpampiasa.